Ama Garo Ama ha Garaan, Dadkii Wuu Kuwada Gartee, Guntigiina Kaa Furaye – Rasaasa News
Jun 17, 2010 Ama Garo Ama ha Garaan, Dadkii Wuu Kuwada Gartee, Guntigiina Kaa Furaye
Sidda aad wada ogsoontihiin waxaa maalin dhaweyd yimid dalka Norway Jwxo-shiil oo kaligiis ah, cidna ayna kala soconin dadkii ay isku kooxda ahaayeen. Hadaba dadka siyaasada Jwxo-shiil indha-indheeya waxay isweydiiyeen sababta Jwxo-shiil kaligiis halkan Oslo keentay iyo khaasatan cidda uu rabay in ay wax u qabato.
Markaan aarinta dhan walba ka eegnay waxaa noo soo baxday jawaabtan. Intiina siyaasadda caalamka la socota ee waxaad xasuusataan in muddo dhawr bilood ah hor magaalada Copen Hagen ee dalka Denmark lagu qabtay shir caalami ah oo laggaga hadlayey bay’adda aduunka. Shirkaas waxaa wadamada Africa ugu kurkuroona wadanka Itobiya, waxaana lagu dhisay guddi ka kooban madax dhowr ah oo uu gudoomiye u yahay Raysul wasaaarihii dalka Ingiriiska ee shaqada ka tagay Golden Brown. Ku xigeen waxaa loo doortay Raysul Wasaaraha dalka Norway Mr Jens Stoltenberg. Raysul wasaaraha Itobiya Meles Senawi waxaa loo doortay xubin muhiim ah oo khaasatan wuxuu qaatay saamigii Africa.
Hadaba markii Mr Golden Brown shaqadiisii lumiyey waxaa Jagadii Gudoomiyanimada ee guddiga bay’ada caalamiga la wareegay Raysul wasaaraha Norway Mr Jens Stoltenberg. Marka sidaas daraadeed waxaa Meles Senawi gudoomiye u ah Mr Stolten Berg oo wuxuu rabo ka dhameyn karo.
Jwxo-shiil iyo qabiilkiisu arintaas sifiican ayey ula socdaan waxayna go’aansadeen in ay dowladda Norway kala hadlaan 2 arimood oo kala ah;
1. In Itobiya la dhexdhexaadiyo oo Meles Zenawi si fiican loogu sheego in Jwxo-shiil diyaar u yahay in uu xaroodo sidaas daraadeedna saamiga mucaaradka ee ugu weyn uu isagu helo. Isla mar ahaantaas wuxuu ka qarinayaa xubnaha kale ee kooxdiisa oo iyagu ah kuwo uun iska daba socda isaga. Cabdirahmaan khaliif dhicis ayaana ceelka ugu jira oo xidhiidhinaya xagga gudaha.
2. Arinta kale waa arinta Bashiir Makhtal oo qabiilka Jwxo-shiil, xil gaar ah iska saaraan oo loo arko ninka ugu muhiimsan ee ka xidhan kooxda Jwxo-shiil, oo ay ku doodaan in la qabtay isaga oo meel banaan dhar huudhay ah la fadhiya, balse ay arintu sidaas aad uga duwan tahay.
Arinta kale ee wejigabaxa ku noqotay dhamaan kooxda aan reerka Jwxo-shiil ahayn, ee agg taagan waa arinta dilkii naxariis darada ahaa ee loo geystay Allaha unaxariistee Marxuum Liqoowe Muxumed Tayse. Jwxo-shiil boggiisa OGADEN.com, waxaa lagu soo qoray mudo gaaban ka hor in ay ciidamo gaar ah qabsadeen Ceelasha shidaalka ee Hilala, laakiinse ciidamadii joogay la siiyey meel nabad ah oo ay ka baxaan ka dib markii ay sheegeen in ayna dagaal rabin.
Horey waxaa loo xaqijiyay in ay dileen Dr M.Sirad Dolal. Waxaan wada ogsoonahay wareerkii lagu qaaday Mudane Maxamed Mursal Shiil kaas oo Sweden ka dhacay. Waxaa ku xigtay in Liqoowe Muxumed Tayse oo shacab ah, shaqana aan ku lahayn dagaalada, lagu xasuuqo gurigiisa hortiisa laguna faano oo DHAFOORINa lagu tilmaamo, xasuuqan arxandarada ah. Waxaa hada ugu dambeeyey in Magaalada Oslo Toori lagu weeraro Cabdirashiid Cali Shucaac arintaas oo dhacday maalin uun ka dib markuu Jwxo-shiil yimid Magaalada Oslo.
Dagaaalka qabiilka ee Jwxo-shiil ruuxii hadda ka hor uu shaki kaga jiray maanta cadayntan xagay ka mari? Waxaan filayaa in iska celin mooyee ayna maanta jirin ogaan la,aan waxyeelada uu gaystay ama uu eegaba gaysanayo.
Jwxo-shiil, hadda waa uu ogaaday in ay cid waliba fahamtay, xaalkiisuna waa sidii geel geelashii kale milix loodhigay isagiina uurinayo, laakiinse aan milix loo haynin. dadkii ayaa ka kala yaacahaya ninkastana nabad iyo dalkiisii buu rabaa. Ururada UWSLF IYO ONLF waxay qaateen Nabad. Marka Jwxo-shiil xaalkiisu waa gadood hunguri iyo xukun jacayl madaxmaray “wax la waayey geelow ninkii waalan baw duda,e”.
Sidaad xasuusataan wadankii midowga Sovietiga waxaa mamnuuc aheyd in caruur curyaamiin ah Tv-yada caalamka la tuso, waxayna dhihi jjireen anagu malihin cudurkaas. Markii shuuciyaddi dhacday waxaa TV-yada reer galbeedku soo saareen Caruur maskaxda iyo jidhka curyaamiin ka ah oo ku dhexnool Ey iyo Bisado. Haanta Jwxo-shiil marka ay dilaacdo ha loo diyaar garoobo in dadka dhibaataysan ee ku kala daadsan Eritrea, Hageisa, Bari iyo dunida dacaladeeda in la caawiyo.
Jwxo-shiil, da,a iyo doqonimo wax ay ka tahayba wali ma arko waxyaabaha dhacay iyo sida ba,an ee ay ummadu ugga hor timid isaga iyo inta wax ma garatada ah ee la gudhisay halgankii guyaal badan la waday.
Gabagabadii, ninkii dhagaha la,aa ee garii laga helay, wuu gartay oo dhago la,aanta mooyee waxaa uu ahaa caaqil, kolkii la waydiiyey maxaad ku garatay in gartii lagaa helayna wuxuu yidhi dadka oo dhab baa isoo dhawray.
Saaxiibayaal Jwxo-shiil wali wuu garan la,a yahay guul darada uu Ogadeen iyo halgankii ONLF uu gayeysiiyey, maantana isagii oo kaligiis ah ayuu galgalin fadhiyaa.
Ina-dhuubo oo uu Eebahay u Fara Goday Kana Soo Fakaday, Xeebta Dhiiga Ogadeenka